Eksodho 17 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kugunun’una nezvekushaya mvura paHorebhi (1-4)
Mvura inobuda padombo (5-7)
Kurwiswa nevaAmareki uye kuvakunda (8-16)
17 Ungano yese yevaIsraeri yakabva kurenje reSini+ ichiti ikafamba yombomira, sezvayaiudzwa naJehovha,+ ndokuzodzika musasa paRefidhimu.+ Asi pakanga pasina mvura yekuti vanhu vanwe. 2 Saka vanhu vakatanga kupopotera Mozisi+ vachiti: “Tipe mvura tinwe.” Asi Mozisi akati kwavari: “Nei muri kundipopotera? Munorambirei muchiedza Jehovha?”+ 3 Asi vanhu vakanga vanzwa nenyota, uye vakaramba vachigunun’unira Mozisi+ vachiti: “Wakatibudisirei muIjipiti? Kuti utiuraye nenyota pamwe nevanakomana vedu nezvipfuwo zvedu?” 4 Mozisi akazochemera Jehovha, achiti: “Ndoita sei nevanhu ava? Ndikavanonokera vachanditema nematombo!” 5 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Famba uri pamberi pevanhu, uine vamwe vakuru vaIsraeri netsvimbo yako yawakarova nayo Rwizi rwaNire.+ Enda nayo iri muruoko rwako. 6 Ini ndichange ndakamira ipapo pamberi pako padombo riri muHorebhi. Unofanira kurova dombo racho, mvura yobuda mariri, uye vanhu vachainwa.”+ Mozisi akaita saizvozvo vakuru vaIsraeri vakatarisa. 7 Saka akatumidza nzvimbo yacho kuti Masa*+ uye Meribha,*+ nemhosva yekupopota kwevaIsraeri, uye nekuti vakaedza+ Jehovha vachiti: “Jehovha ari pakati pedu here kana kuti kwete?” 8 VaAmareki+ vakauya, vakarwisa Israeri muRefidhimu.+ 9 Mozisi akabva ati kuna Joshua:+ “Tisarudzire varume, moenda kunorwisa vaAmareki. Mangwana ini ndichanomira pamusoro pechikomo, ndiine tsvimbo yaMwari wechokwadi muruoko rwangu.” 10 Joshua akabva aita zvaakanga audzwa naMozisi,+ uye akarwisa vaAmareki. Uye Mozisi, Aroni, naHeri+ vakakwira pamusoro pechikomo. 11 Mozisi paairamba akasimudza maoko ake, vaIsraeri vaikunda, asi paaingodzikisa maoko ake, vaAmareki vaikunda. 12 Maoko aMozisi paakanga ava kurema, vakatora dombo, vakariisa pasi pake, akagara pariri. Aroni naHeri vakabva vatsigira maoko ake, mumwe akatsigira ruoko urwu uye mumwe rumwe rwacho, kuti maoko ake arambe akatsiga kusvikira zuva ravira. 13 Saka Joshua akakunda vaAmareki nemauto avo nebakatwa.+ 14 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Nyora izvi mubhuku kuti zvive chiyeuchidzo, uye uzvitaurire Joshua, ‘Ndichaita kuti vaAmareki vasayeukwa zvachose pasi pedenga.’”+ 15 Mozisi akabva avaka atari, akaitumidza kuti Jehovha-nisi,* 16 achiti: “Nekuti ruoko rwaAmareki runorwisana nechigaro cheumambo chaJah,+ Jehovha acharwa naye kwezvizvarwa nezvizvarwa.”+
^ Kureva kuti “Kuedza; Muedzo.”
^ Kureva kuti “Jehovha Ndiye Mureza Wangu; Jehovha Ndiye Utiziro Hwangu.”